Banyere Anyị - Shanghai Jiahao Machinery Co.Ltd.
SHANGHAI JIAHAO Machinery Co., Ltd., dị ka a maara nke ọma plastic extrusion akụrụngwa soplaya, dị na Shanghai China na wuru atọ nrụpụta bases na Shanghai na Jiangsu n'ógbè.Na ndabere nke ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ na elu àgwà akara, ụlọ ọrụ nwere kasị ukwuu rụzuru na isi oru oru ngo nke Ministry of Communications, Ministry of Construction na Telecom usoro maka ọkọnọ iche iche nke plastic extrusion akụrụngwa.
Ndepụta ngwaahịa ụlọ ọrụ:
2.Plastic (PVC, PC, PS, PET, PE, PP), mpempe akwụkwọ, ahịrị mmepụta osisi;
3. WPC / SPC flooring mmepụta akara
4.Plastic (PVC, PC, PS, PET, PE, PP) Profaịlụ Production line;
5.Wood plastic mmepụta akara profaịlụ;
6.Mixer, Crusher, grinder, Mold, Chiller, etc. igwe inyeaka maka
7.Turn-key project maka mpempe akwụkwọ plastik, ọrụ mmepụta profaịlụ
All n'elu ngwá nke Jiahao Company na-exported ka ihe karịrị iri abụọ mba na Europe, North America, South America, Middle East, Africa na South-East Asia mpaghara na mba ndị ọzọ, nke nwere aha ọma na-aga nke ọma oru ngo n'akụkụ ndị ahịa.
Ụlọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ruo n'ókè kachasị, na-achịkwa usoro ọ bụla nke ọma, ma na-eme ka akụkụ nke ọ bụla dị mma.Mgbe a na-enye ndị ahịa ngwá ọrụ ahụ, anyị ga-eme nyocha zuru ezu na arụmọrụ nke ngwá ọrụ iji meziwanye nkà na ụzụ na àgwà anyị.Ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na teknụzụ nhazi zuru ezu na Shanghai.
Ụlọ ọrụ anyị nwere otu ndị ọrụ nkà na ụzụ magburu onwe ya, karịa 100 ọkachamara na ndị ọrụ aka ọrụ.Ha ga-eme ike ha niile iji chepụta ezigbo akụrụngwa maka ndị ahịa anyị.Anyị nwere ngalaba na-ere ahịa nọọrọ onwe ya iji nye ndị ahịa ọrụ ahịa azụmaahịa zuru oke.Ndị injinia anyị ga-enyekwa ọrụ mba ofesi.